ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ လုံခြုံစိတ်ချရသည့် သွားလာနေထိုင်မှုဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်သားများ လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်မှု (Safe Migration) ဖြစ်စေရန် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ဟု အကြွင်းမဲ့လက်ခံထား ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ပိုင်းက နေပြည်တော် MICC-2 တွင် ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများနေ့အခမ်းအနားအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ဘေးမသီရန်မခရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်စေဖို့နဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဖြစ်စဉ်မှ ဆိုးကျိုးများနည်း နိုင်သမျှနည်းပြီး ကောင်းကျိုးများနိုင်သမျှ များအောင် လုံခြုံစိတ်ချရသည့်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင် (Safe Migration) ဖြစ်စေဖို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မိမိအနေနဲ့ အကြွင်းမဲ့လက်ခံထားပါတယ်”ဟု ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက”ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ကြမ်းတမ်းနိုင်သော်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်ကြတဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးလူသားချင်းစာနာစွာနဲ့ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပါက ရွှေ့ ပြောင်းသွားလာသူများ အပါအဝင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ခြင်း၊ လွှဲပို့ငွေများဖြင့် မိ သားစုဝင်ငွေနှင့်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံ ခြားဝင်ငွေတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အရင်းအနှီးစုဆောင်း မိနိုင်ခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့စွန့် စားလုပ်ကိုင်တတ်တဲ့အလေ့အထနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်တတ်တဲ့လူမှု အသိုက်အဝန်းဖြစ်လာစေရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းစတဲ့ ကောင်းကျိုးများကို ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ ခြင်းဟာသီးသန့်ဖြစ်တည်နေတာ မဟုတ်ဘဲ Cross- Cutting Issue ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲ အခြားသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနများအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့မ ဟာဗျူဟာများ၊ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်မဟာဗျူ ဟာများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ရွှေ့ပြောင်းသွား လာခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်း စားချိတ်ဆက်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်”ဟုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
”ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ လူ ခုနစ်ဦးမှာတစ်ဦးက ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူများ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ပေါင်း ၇ဝဝဝ မှာ သန်းတစ်ထောင် ကျော်ဟာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူများဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်သန်းကျော်ဟာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှာ သွားရောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂ဝ၁၄ သန်း ခေါင်စာရင်းအရ သိရှိရပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ မိသားစုလွှဲပို့ငွေဟာ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ် လာ ၃၉၅ သန်းခန့်ရှိပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၇ဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်”ဟု ဒုတိယ သမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
'လင်္ကာဒီပချစ်သူ' စင်တင်ပြဇာတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန် မသုံးသပ်ချင်တော့ဟု စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုေ
မိမိကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်အားရနေခြင်း မရှိရန် အသင်းအား ဂွါဒီယိုလာ သတိပေး
မြဝတီမြို့ ၌ တရားမဝင် ဖွင့်လှစ်နေသည့် ဂိမ်းဆိုင်များ ပိတ်သိမ်းရန် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ လိုက
ဆင်ဆာဖြတ်ခံခဲ့ရသော ဇာတ်ဝင်ခန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းထားသော ‘မီ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာ??